★ Indlu yaseFama yaMandulo★ Balekela kwixesha elidlulileyo!
Ifama sinombuki zindwendwe onguViktor
Eli lithuba lokwenyani lokufumana amava obomi bakudala kwifama kunye nokungenela imisebenzi yasefama kwikhaya laseKapl.
Kutheni uhlala nathi?
→ indawo yokuhlala eyodwa, okusingqongileyo & namava
→ amagumbi abekwe kwinkulungwane ye-19 kunye nefanitshala ebuyiselweyo yezinyanya
→ dibana nabahlali & nembali
→ yiza negadi epleyitini yakho
→ baleka kwihlathi lasezidolophini kwaye ubuyele kwixesha elidlulileyo - detox ingqondo yakho
→ funda ngobomi bezinyanya kwaye wonwabele umboniso wezinto zasefama ngaphakathi endlwini
→ igumbi lewayini labucala
Yiba nomfanekiso wakho ukude nezihlwele kunye nobomi bakho obukhawulezayo bemihla ngemihla. Apha, kwikhaya laseKapl, ixesha liyama, kwaye likubuyisele kwixesha elidlulileyo, apho ujikelezwe buhlaza obuhle, uxolo, isithethe kunye nabantu basekhaya abanobuhlobo.
Le ndlu yasefama ingaqhelekanga yeminyaka eyi-170 ibekwe kwindawo eluhlaza engonakaliswanga kwilali yaseDražen Vrh, ethe saa phezu komqolo kwaye ityalwe nezidiliya. Ibonakaliswa yindlu yokhuni egciniweyo (iSlovene: cimprača), ekhuselweyo njengesikhumbuzo se-ethnological. Inika amagumbi alula, ifenitshala ebuyiselweyo yookhokho. Ngokuhlala kwikhaya laseKapl, uya kuba namava obomi bokwenyani basefama. Ilungele iqela labahlobo aba-6 okanye usapho olukhulu.
★ ELULULILE & EBUYISIWEYO LWEFENISHARE, KODWA ISEXOLWE KAKHULU:
→ Amagumbi amathathu, alungiselelwe phantsi kweliso elingqongqo leZiko loKhuseleko lweLifa leMveli yaseMaribor, abekwe ngenkulungwane ye-19.
→ Yonke ifenitshala yezinyanya yabuyiselwa (iibhedi, amagunjana, iitafile, izitulo)
→ Isitovu sokupheka ngeenkuni ekhitshini sokupheka ukutya ngeenkuni. Siya kukuvuyela ukukubonisa indlela esebenza ngayo.
→ Itafile enkulu enkulu ebuyisiweyo ilingana ngokulula nabantu abali-11 kwisidlo sangokuhlwa. Kutheni ungazami ikeyiki enegwele yaseSlovenia eyenziwe kwisitovu sasefama.
Nangona uya kuhlala kwifama endala ebuyiselweyo, siye salungiselela igumbi lokuhlambela lanamhlanje elineshawa, kwaye saqinisekisa nokuba unokuhlamba impahla yakho kumatshini wokuhlamba ukuba kuyimfuneko. Kukho nefriji ekhitshini.
★ ULWAZI OLUBALULEKILEYO:
→ Akukho nxibelelwano lwe-intanethi kwipropati.
→ Akukho zixhobo zale mihla kwipropati (akukho TV, akukho sitovu sombane, akukho microwave...)
→ Izilwanyana ezincinci zihlala efama: inja, iinkukhu, iinyosi, imivundla...
★ YENZA ISITOVU SAKHO SASEKHAYA NGESITOVU SOMTHI!
Akukho nto ithi ekhaya ngaphezu kwendlu efudumeleyo ezaliswe ngamavumba amnandi okupheka okulungileyo kunye nesonka esitsha! Ukupheka kwisitovu seenkuni Kulula! Nokuba awuyiqhelanga ayinzima tu! Kwaye ibonelela ngokutya okunencasa kunokuba unokucinga. Cinga ngesonka esenziwe ekhaya, esigalelwe ibhotolo yasekhaya kunye nobusi obutsha okanye ijam.
★ UKUSUKA EGAZINI UKUYA KWISICWELE SAKHO
Ziphakele ngemifuno yamaxesha athile onyaka evela egadini, iziselo ezisuka kwidiliya, kwaye uzilungiselele isityu esisemagqabini kunye neesuphu. Fumana iindlwane zenkukhu kwaye uthathe amaqanda amatsha kwisidlo sakusasa kwaye ufunde ukubhaka isidlo esikhethekileyo sendawo "i-gibanica" kwi-oven yesonka.
★ IWANINI INDLELA YAKHO!
Ngcamla iiwayini zasekuhlaleni kwindawo yokugcina iwayini. Igumbi lokusela iwayini yindawo ezele ziinkumbulo kunye nesiseko sokuhlalisana. Cula i-toast kwaye uthi Cheers! ngolwimi lwesiSlovenia.
★ NGENA NEMISEBENZI YEFAMA!
Ungangena kwi-barn kunye nomninimzi, ufunde malunga nomsebenzi kwisidiliya, kwi-meadow, okanye kwi-cellar. Unako kwakhona ukujonga iinyosi kunye nomgcini weenyosi kwaye ufunde yonke into malunga nemveliso yobusi.
★ HAMBA NGAPHAMBILI!
Iindwendwe ziyakwazi ukubona ingqokelela yezixhobo ezigciniweyo kunye nezinto ezindala, ezilungiselelwe yi-Regional Museum Maribor. Izaliswe yinkumbulo yexesha elidlulileyo nangona kunjalo, ikwalixabiso langoku.
★ KUTHENI UHLALA NATHI?
Siyaqonda ukuba ngelixa ujonge indawo yakho yokuhlala elandelayo, indawo yokuhlala yasefama ayinakuba lukhetho lwakho lokuqala. Nangona kunjalo, ukuhlala kwindlu yasefama kuya kukunika ithuba lokungcamla ukutya okutsha kwasekhaya, ufumane ilali entle nenoxolo yaseSlovenia kwaye udibane nabantu bokwenyani, kwaye ufunde ngembali kunye nenkcubeko.
Sindwendwele kwaye wenze iinkumbulo ezintle apha eDražen Vrh!
Uhlala kwindawo enoxolo kodwa usondele kuyo yonke into ngaxeshanye. Nokuba ufuna ukutyelela iTerme Lendava, ujonge imithombo yezimbiwa ezishushu, ukupheka okugqwesileyo, iiwayini ezikumgangatho ophezulu, ukukhwela ibhayisekile kunye nokuloba, ungayenza yonke loo nto ngokulula.
Uya kuba nethuba lokufumana iintlobo zeentyatyambo ezingaqhelekanga nezinqabileyo kodwa uphinde uhlole uluhlu lwezilwanyana.
Relax ekuhambeni kancinci kwamandla alungileyo!
Umbuki zindwendwe ngu- Viktor
Apha, ezilalini, uya kwamkelwa ngumamkeli-zindwendwe onobubele ohlala kwindalo kwaye esebenza nendalo. Ekufikeni kwakho, uya kunikwa ukhenketho olufutshane malunga nendlu. Nceda usazise ixesha lakho lokufika ubuncinane kusuku olu-1 ngaphambi kokuba kunokwenzeka. Wamkelekile ukuba uqhagamshelane nam nangaliphi na ixesha (ubuqu okanye ngomnxeba). Ndihlala endlini esecaleni kweyakho, ngoko ke ndingafikelela nanini na xa undidinga.
Apha, ezilalini, uya kwamkelwa ngumamkeli-zindwendwe onobubele ohlala kwindalo kwaye esebenza nendalo. Ekufikeni kwakho, uya kunikwa ukhenketho olufutshane malunga nendlu. Nceda us…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Sv. Ana v Slov. goricah